Ixtiraam Isii Aan Jeceyl Kuugu Bedelo. | Markacadey.net Facebook
Warka oo Video	8:52 am » Ciidamada Kenya oo weeraro xoog leh kala kulmaaya Ciidamada Ururka Al Shabaab 8:42 am » Wararkii ugu dambeeyay Magaalada Kismaayo iyo Prof. Gaandi oo olole xoog leh ka wada 8:33 am » Niman hubeysan oo afduubtay afar ruux oo Cadaan ah 8:26 am » Magaalada ugu ammaanka badan ee Puntland oo lagu toogtay nin dhalinyaro ah 8:20 am » Al Shabaab oo dishay Sarkaal ka tirsan Dowladda Kenya 5:39 pm » Rag hubeysan oo caawa Magaalada Muqdisho ku dilay nin dhalinyaro ah 5:23 pm » Madaxweyne Xasan Sheekh oo si weyn uga hadlay xiisada Magaalada Kismaayo (Aqriso) 12:08 pm » SaraakiishiiUrurka Igad oo Magaalada Kismaayo goor dhaw kula kulmay Sheekh Axmed Madoobe 12:00 pm » Ciidamada Raaskambooni oo maanta dil iyo dhaawacba ka geystay Magaalada Kismaayo 10:28 am » Laba Xildhibaano oo cusub oo maanta lagu soo daray Xildhibaanada Baarlamaanka Somaliya By: Riwaan Haji // Aug 06 2012 at 3:05 pm // 2,447 Reads // Article & Opinion, Wararka Caalamka Ixtiraam Isii Aan Jeceyl Kuugu Bedelo. Share Tweet
In qofba qofka kale uu ixtiraamo waa lagama maarmaan nolosha guurka, nabigeenuna aad ayuu ugu celceliyay asagoo marna u jeedinayo haweenka marna ragga. Laakiin waxaad moodaa dhinaca ixtiraamka in uu haweenka aad ugu bogaadiyay oo uu faray in nimankooda ay xalaasha ku guursadeen aad u ixtiraamaan una ciseeyaan. Xitaa heer wuxuu gaaray nabiga inuu yiraahdo “Hadii aan qof fari lahaa inuu qof qof kale u sujuudo, waxaan fari lahaa naagta inay ninkeeda u sujuudo”.
Dabcan Nabigeena AWC hadafkiisa ma ahayn inuu dumarka liido, balse xikmad weyn ayaa ku jirta xadiiskan. Maxaa yeelay sida dabiiciga ah, ninka raga ah markuu ixtriaam ka helo haweenaydiisa, wuxuu ku jawaabaa inuu jeceylkiisa uu tuso, wuxuu kaloo helaa xamaasad dheeraad ah iyo firfircooni u sahalysa tacab maalmeedka. Sidoo kale haweenka markay ogaadaan jeceylka ninkooda uu u qabo, farxad iyo kalsooni dheeraad ah ayaa soo galaya taasoo u sahlaysa howsha guriga iyo tacabka caruurta.
Arinta muhimada ixtiraamku raggu u leedahay waxaa xitaa baryahan aad taageeray reer galbeedka. Sida Dr. Emerson Eggerichs oo mudo badan cilmi baaris ku sameeyay laba qeybood oo ah (Jeceylka iyo Ixtiraamka). Markuu dhameeyay baaristiisa, warbixinta uu ka jeediyay waxay tahay in raggu ixtiraamka sida hawada aan neefsano ay ugu baahan yihiin, Haweenka jeceylka ninkooda sidoo kale ayay ugu baahan yahiin.
Dhibaatada ugu wayn waxay tahay ragii qaar oo aaminsan in xaaska la ogeysiinayo jeceylkooda uusan daruuri ahayn, qaarna waa iskala weyn yihiin iyo qaarna waaba ka xishoodaan. Raggu xitaa qaar baa aaminsan kulana taliya asxaabtooda inayan ogeysiin jacaylka naagahooda ay u qabaan. Waxay ku andacoonayaan in hadii la ogeysiiyo xaaska ay kuugu kor soconayso ama buur isa saarayso. Rag qaarkii oo aad ugu fiican ayaa jiro in ay ogeysiiyaan jeceylka ay xaaskooda u qabaan, laakiin dadka arkaya in ninkeeda u jajaban yahay waxay ku xamanayaan in ay sixirtay oo aanay caadi ahayn.
Tusaale waxaa inoogu filan in haweenku muhimad balaaran siiyaan in ay ogaadaan jeceylka ninkooda u qabo. Sheekadi dhexmartay Caa’sha (Ummul Mu’miniin) iyo Nebigeena suubanaa marka ay weydiisay ayadoo dhahaysa:
Rasuulka Alle: Xariga waa sidiisa (Wax is kama bedelin), Ilaahaan ku dhaartee, kama murgo goortaan dhimanaya, markaan ogaaday adiga inaad xaaskeyga tahay markaan jannada galno. Caa’isha markay maqashay hadalkan macaanta baday aad ayay ugu faraxday.
Waxaa dhacaysa in raggu markay ka gaabiyaan in ay tusaan jeceylkooda badanaaba haweenku waxay ku jawaabaan dhaleeceyn, calaacal iyo ixtiraam la’aan. Raggana sidoo kale markay ixtiraam ka waayaan haweenaydooda, qaar waa ismoogeysiinayaan, qaarna muran ayay ku jawaabaan oo dabkii shidnaa ay dab kale ku sii daraan Gurigoo dhan ayaa ciriiri noqda markay xaaladani jirto (Ijiid aan ku jiidee waa gacmo daalis). Sida kaliya looga baxsan karo ciriirigan in labada qofood mid ka mid ah hurdada ka koco uu rogo dabeecadiisa, sida ninkii inuu bilaabo tusida kalgaceylka uu u qabo xaaskiisa. Ilaahayna qawm ma bedelo ilaa ayaga nafsadoodi ay isbedelaan.
Laakiin waxaa muhiim ah inuu qofku ogaado in markay haweenaydaada saa u calaacalayso ay tahay baahi jeceyl iyo kalsooni daro dhinacaaga ka yimid, oo hadafkeeda uusan ahayn in ixtiraam daro ay kula macaamilooto. Sidoo kale ninkaada markuu ku go’doominayo uu ku inkiraayo, wuxuu ka ilmoonayaa gudaha oo u ooynayaa ixtiraamkaada kamana aha inuusan ku jeclayn.
Waxaan kor ku soo xusnay muhimada ixtiraamka iyo jeceylka u leeyahay nolosha guurka, waxaan hadana guda galaynaa oo aan ku soo koobaynaa akhlaaqyada ama aadaabta suura galiya ama kordhiya ixtiraamka iyo kalgacaylka ka dhexeeya labada is qabta:
ο Ka dhig ninkaada Hogaamiyaha guriga:
Dawrka hogaamiyanimada ilaah baah ninkaaga qur’aanka ku siiyay mana ahan mas’uuliyad sahlan. Laakiin ogalaanshahaaga iyo taageeriista hogaanka ninkaaga waxay u dhigantaa adoo tiri ilaahow waan ku maqlay waana ku adheecay. Raggana waxay si fiican u hogaamiyaan markay xaaskooda u ogalaadaan una sahlaan inuu hogaamiyo. Soomaalina waxay tiraa “Dooni laba naakhuude leh way jabtaa”. Marka aan ninka fursad la siin, qaarkii waxay ku jawaabaan in ay isaga dhex baxaan maamulka, qaarna muran ayay galaan oo u sii horseedaya iska hor imaad burburinaya guriga ,saameyna ku yeelanaya korsiimada caruurta arkaysa iska hor imaadkaas.
Tan micnaheeda ma aha in haweenka yiraahdaan mishaakilkaana jira, adiga kaligaa xali. Waxaa haboon inaad dhahdo, arintaana jirto sideey kula tahay, oo maxaa damacsan tahay. Adiga ra’yigaaga ka dhiibo kuna dheh adiga wixii kula haboon sameey waana kugu garab galayaa (Laakin arintu waa inay diinta aan ka baxsnayn). Hadaladaan oo kale ninka aad ayay u dhaqaajisaa oo u farax gelisaa, jacayl dheeraadna way ku abuurtaa. Ninka ragga ahina waa inuu mas’uuliyada hogaanka ka soo baxaa, hogaankana ma aha intaad kursiga guriga fariisato oo aad amar kaliya bixiso. Hogaamiyaha dhabta ah, waa kii u adeega danaha reerkiisa, dulqaad badan, tashada oo naxriis badan. Tusaalooyin badan ayaa jira oo rag ku faana, markay guriga soo galaan in qof walba (caruurta iyo xaaska) ay baqaan uu guriga shib uu noqdo. Waa astaan hogaan xumo ah oo mustaqbalka dhibaato abuuraysa.
ο In aadan hoos u dhigin lamaanahaaga:
Markaad dad kale dhex joogtaan in aadan isku jeesjeesin, oo qofba qofka kale wax fiican ka sheego. Tusaale ahaan, in marka xaaskaaga ay reerkaaga dhex joogto inaad wax fiican ka sheegto, hadii la gardareysto ama hadal lugu duro inaad difaacdo. Sidoo kale, haweenayda in ay dad ka hortooda ku sheegin ninkeeda ceebihiisa iyo meeluhuu ka liito. Raggana dad hortooda lugu ceebeeyo, aad ayay uga dhintaan sida Soomaalidu tiraa “Rag ciil cadaab ka doora”’.
In qofba qofka kale taageero markay dhibaato jirto.
Umul Mu’miniin, Khadiijah aad ayay u garab istaagtay oo u taageertay nabigeena AWC oo ay soo food saareen dhibaatooyin aad u culus markuu Makah joogay. Geerideedana Nabigeena aad ayuu ugu murgooday, mana iloobaynin inuu sheego waxyaabihii ay u qabatay. Ragga sidoodaba waxay u kala dheereeyaan siday u kala naago fiican yihiin siday Soomaalidu ku maahmaahdo “Rag naagaa is dhaafshay”. Ninka qaba naagta hufan oo xil kasta ah wuxuu dheereeyaa raga kale. Dabcan, sidoo kale haweenayda nin hufan qabta waa ka dheereysaa haweenka kale, kalsoonideedana waa sareysaa Fadlan walaalayaal, hadii maqaalkani aan ku sheegay wax khalad ogow wuxuu ka yimid nafsadayda daciifka ah iyo sheydaanka, wixii fiicana waa ilaahay xagii, mahad weyna asagaa iska leh. Waxaan kaloo idiinka codsanaayo inaad ducadiina iga iloobina.
Ragga iyo Dumarka kuweeba beenta ku dheereeya (Daraasad lasameeyaay) Quisadaan diiniga ah waa mid mudan in lagu cibro qaato hadaba akhri oo ku cibro qaado adna Sheeko Qoaol badan oo nin soomaali ah oo kulmay swewn uu sameeyay Wiil Soomaaliya 18 sano jir ah ayaa qirtay inuu kufsaday Haweenay 50 jir ah oo maraykan ah Siduu dalkaygu u hor mari karaa? Dumar masaeyr galay miyaan dejin karaa qisadaan waxay ku waa qiso maseyr sii Akhri Dhibaatooyinka caafimad daro ee kobaha dheedheer iyo kobaha culus ay leeyihiin Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of MARKACADEY.net. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards. comments